कसरी गर्‍याे सर्वोच्चले सर्वसम्मत फैसला? - Nepal Readers
Home » कसरी गर्‍याे सर्वोच्चले सर्वसम्मत फैसला?
कसरी गर्‍याे सर्वोच्चले सर्वसम्मत फैसला?
प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धका मुद्दामाथि बहस प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले पहुँच पुर्याएर भेट गर्न आउने सबैलाई स्पष्टसँग भनिदिनुभएको थियो ‘मेरो पनि एउटा मत हुन सक्ला । तर, इजलासको संयुक्त मतमा मेरो मत बहुमततर्फ हुनेछ ।’ अर्थात् व्यक्तिगत रूपमा आफूले जे सोचे पनि समग्रमा इजलासको बहुमत धारणाभन्दा फरक मत नराख्ने विचार उहाँले राख्दै आउनुभएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
निवेदक र विपक्षीको तर्फबाट बहस,फेरि जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको धारणा आइरहँदा यता अदालतमा फैसलाको गन्ध सुँघ्न बालुवाटारले धेरै पटक प्रयास गरेको बताइन्छ । गत शुक्रबार बहसका सबै प्रक्रिया सकिएपछि त्यो क्रमले लिएको गति अरुलेभन्दा बढी अदालत र श्रीमानहरूले महसुस गर्नुभएकै थियो ।
त्यसैले होला बहस नोट बुझाउने म्याद सोमबार सकिएपछि मंगलबार बिहान साढे १० बजेदेखि संवैधानिक इजलासका श्रीमानहरूसँग प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त छलफल गर्नुभएको थियो । त्यहि क्रममा उहाँले ‘सपना श्रीमान जहाँ उभिनुहुन्छ,त्यहिँ निर्णय हुन्छ, त्यो नै सर्वसम्मत हुन्छ’ भनेर फैसलाबारे आफ्नो छनक दिनुभएको थियो ।
मंगलबार फैसला आउनुअघिको अवस्थाबारे सविस्तार चर्चा गर्दै स्रोत भन्छ ‘प्रधानन्यायाधीश राणाले अपरान्हतिर सबैसँग माग्नुभएको राय क्लियर्ली आएको थियो । शुरुदेखि आफू फरक नहुने भनेर बताउँदै आउनुभएका उहाँलाई चारै जनाबाट एउटै खालको राय प्राप्त भएपछि खुदो पल्टिएको थियो । असहमतिको स्वर नै आएन र सर्वसम्मत आदेशको आधार बनेपछि साँझ नै फैसला सुनाउने निर्णय तत्काल गर्नुभयो ।’
त्यसअघि न्यायाधीशहरुबीच संविधानको निश्चित धाराबारे खुल्ला व्याख्या भएको थियो । अन्तिममा ल त्यसो भए यसरी जाऊँ भन्ने बित्तिक्कै ठिक्क पारिएको आदेशको पुछारमा संक्षिप्त निर्णय थप्ने बित्तिक्कै सबैले एउटै पृष्ठमा भटाभट दस्तखत धस्काउनुभएको हो ।
हुन तः पछिल्लो समयमा राणाले आफ्ना अति निकटस्थहरूसँग पनि सर्वसम्मत निर्णय हुने क्लियरली बताउँदै आउनुभएको थियो । मंगलबार साँझको फैसलापछि अरुकोझैँ अढाइ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना प्रधान मल्लको हाइट एकाएक चुलिएको छ ।
प्रारम्भमा राणालाई संवैधानिक इजलास गठनमै महाभारत भएको थियो । राजनीतिक पार्टी,त्यसमा पनि सत्तारुढ दल नेकपा मुछिएको विषय भएकाले जसरी पनि पूर्वएमाले भनेर चिनिएका एकजना श्रीमानलाई इजलासमा हाल्नैपर्ने दबाब र बाध्यतामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघि इजलासमा राखिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हट्ने वातावरण बनेपछि उहाँलाई फेरि त्यहि पहिलेको समस्याले पिरोल्यो । तर, बुध्दिमत्तापूर्ण ढंगले मल्ललाई रोज्नुभएको परिणाम अहिले सुखद अनुभूतिमा परिणत भएको छ ।-जनआस्था
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री अल्पमतमा : अक्टोबरमा आम चुनाव हुनसक्ने
प्रतिगमनविरुद्ध आइतबारः ओलीको झुटो दाबीदेखि धार्मिक आस्थामाथि खेलेको कुरासम्म